အင်္ဂလန်ရဲ့ ကျား ၃ ကောင် ကို ရွေးထုတ်ပေးပြီး ခရိုအေရှားနဲ့ပွဲအတွက် ပွဲထွက် လူစာရင်းကို ရွေးချယ်ပေးလိုက်တဲ့ မော်ရင်ဟို - SPORTS MYANMAR
အင်္ဂလန်ရဲ့ ကျား ၃ ကောင် ကို ရွေးထုတ်ပေးပြီး ခရိုအေရှားနဲ့ပွဲအတွက် ပွဲထွက် လူစာရင်းကို ရွေးချယ်ပေးလိုက်တဲ့ မော်ရင်ဟို
June 11, 2021 - by Editor
တော့တင်ဟမ် နည်းပြဟောင်း ၊ လက်ရှိ ရိုးမား အသင်းနည်းပြ ဟိုဆေး မော်ရင်ဟို ဟာ ယူရို ၂၀၂၀ မှာ အင်္ဂလန် လက်ရွေးစင် အသင်း အောင်မြင်မှု ရဖို့ အဓိက ကျတဲ့ ကစားသမား ၃ ဦးကို ရွေးချယ် ပေးလိုက်ပါတယ် ။
အင်္ဂလန် အသင်းဟာ ယူရို ၂၀၂၀ မှာ စကော့တလန် ၊ ခရိုအေးရှား ၊ ချက် တို့နဲ့ တစ်အုပ်စုတည်းကျရောက်နေပြီး အဖွင့်ပွဲစဉ် အဖြစ် ခရိုအေးရှား အသင်း နဲ့ ကစားသွားရမှာပါ ။ မော်ရင်ဟို ဟာ ခရိုအေးရှား နဲ့ ပွဲအတွက် သူ့စိတ်ကြိုက် အင်္ဂလန် အသင်းရဲ့ပွဲထွက် ၁၁ ယောက် ကိုလည်း ရွေးချယ် ပေးသွားခဲ့ပါတယ် ။
မော်ရင်ဟို က talkSport မှာ ” တိုက်စစ် အသာပေး ကစားဖို့ဆို ပွဲကို ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ထင်ပါတယ် ။ ဘောလုံး ကိုင်မကစားနိုင်ဘဲနဲ့ တိုက်စစ် ကစားဖို့ဆိုတာ ဘယ်လို ဖြစ်နိုင်မှာလဲဗျာ ၊ ကွင်းလယ်ကို ထိန်းချုပ် ကစားနိုင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ် ။ ”
” ကွင်းလယ်မှာ သုံးယောက်ထား ကစားရင် အဲ့ဒီ ဧရိယာကို ထိန်းချုပ် ထားနိုင်မှာပါ ၊ ကျနော် ပြောတဲ့ ကွင်းလယ် သုံးယောက်ထဲမှာ ဖိုဒန် ကတော့ ပါကိုပါ ရမှာပါ ။ ဟန်ဒါဆန် ၊ ရိုက်စ် ၊ ကီဗင်ဖီးလစ် တို့ မပါဘူးလို့ မပြောဘူးနော် ၊ ဒါပေမယ့် ပွဲကို လွှမ်းမိုးနိုင်ဖို့ဆို ပြိုင်ဘက် ကို ထိန်းချုပ် ကစားနိုင်ရမှာပါ ။ ”
” အင်္ဂလန် က ကွင်းလယ်လူကောင်းတွေ ၊ တိုက်စစ် ကစားသမားကောင်းတွေ ရှိနေတော့ သူတို့မှာ အရာရာရှိနေတယ်လို့ပဲ ပြောရမှာပေါ့ဗျာ ။ ဂါရက်(ဆောက်ဂိတ်) က နောက်တန်း ၅ ယောက် ထားပြီး ကြိမ်ဖန်များစွာ ကစားခဲ့ပြီးပါပြီ ၊ သူ အခု ဒီအတိုင်းပဲ ဆက်ကစားမယ်ဆိုလည်း ကျနော့် အတွက် ပြဿနာ မရှိပါဘူး ။ ”
” ဂိုးသမား နေရာမှာတော့ ဒင်းဟန်ဒါဆန် ကို ထားကစား စေချင်ပါတယ် ၊ ဗဟို နောက်ခံလူ နေရာမှာ မက်ဂွိုင်းယား မပါရင်တော့ ဂျွန်စတုန်း နဲ့ တိုင်ရွန်မင်းစ် တို့ကို ကစားစေချင်ပါတယ် ၊ ကုတ်ဒီ က တတိယ နောက်ခံလူဆိုတာ အရှင်းကြီးပါပဲ ၊ ဘရိုက်တန် က ဘန်ဝှိုက် ဆိုတဲ့ လူငယ်လေးကလည်း အရမ်းကောင်းပါတယ် ၊ ဒါပေမယ့် သူအခုမှ ရောက်တာပါ ။ ”
” မင်းစ် က ဦးဆောင်နိုင်စွမ်း ရှိပြီး စိတ်အားထက်သန်တဲ့ ကစားသမားပါ ၊ စတုန်းကတော့ လျင်မြန်ပါတယ် ။​ ညာနောက်ခံ နေရာအတွက်တော့ ဒင်္ဂါးလှည့်ချင်လည်း လှည့်ပေါ့ဗျာ ၊ ဒါပေမယ့် ကျနော်ကတော့ ကိုင်လီ ဝေါလ်ကာ ကို ရွေးချယ်ချင်ပါတယ် ၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လျင်မြန်တဲ့ ကစားသမား လိုအပ်တာကြောင့်ပါ ။ ”
“ရစ်ဆီဂျိမ်းစ်လည်း မြန်ပါတယ် ၊ ဒါပေမယ့် အတွေ့အကြုံ ရှိ ကစားသမား အသက်ပိုကြီးတဲ့ ကစားသမား ဝေါလ်ကာ က ပိုပြီး ပြိုင်ဘက် ဂိုးဧရိယာထဲ ထိုးဖောက် ဝင်ရောက် နိုင်ပါတယ် ။ ဘယ်နောက်ခံလူ နေရာ အတွက်တော့ ချီဲဝဲလ်ပေါ့ဗျာ ၊ နှစ်ခါ စဉ်းစားစရာ မလိုပါဘူး ။ ”
” ချီဝဲလ် က နောက်တန်း ငါးယောက်မှာ ကစားမှန်း သိပါတယ် ၊ ဒါပေမယ့် သူက နေရာလွှတ်တွေ ကျဉ်းမြောင်းအောင် လုပ်နိုင်ပြီး တိုက်စစ်လည်း ဆင်နိုင် တည်ကန်ဘောတွေလည်း ရပါတယ် ။ လုခ်ရှောက ကောင်းမွန်တဲ့ ဘောလုံးရာသီ တစ်ခု ပိုင်ဆိုင် ခဲ့ပါတယ် ၊ ဒါပေမယ့် ချီဝဲလ် က ဘောလုံး ကိုင်ကစားတာမှာ ပိုထူးခြား ကောင်းမွန်ပါတယ် ၊ ဖိအားတွေအောက်မှာလည်းတည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ကစားနိုင်ပါတယ် ။ ကျနော် ချီဝဲလ် ကို သဘောကျပါတယ် ။ ”
” ကွင်းလယ်မှာ ကျနော် သဘောကျတဲ့ ကစားသမား တစ်ဦး ရှိပါတယ် ၊ ဒါပေမယ့် သူ့ကို ပထမဦးဆုံးပွဲမှာ ထည့်မကစားသေးသင့်ပါဘူး ၊ သူကတော့ ဘီလင်ဂမ် ပါ ၊ သူ့မှာ တကယ့် အလားအလာကောင်းတွေ ရှိပါတယ် ။ ”
” ရိုက်စ် နဲ့ တွဲဖက် ကစားဖို့ဆို ဘီလင်ဂမ် က ပြီးပြည့်စုံဆုံးပါပဲ ၊ ဒါပေမယ့် ကယ်ဗင်ဖီးလစ် နဲ့လည်း ဖြစ်ပါတယ် ။ ကျနော့်မှာ သံသယ အချို့ ရှိနေတော့ ဘီလင်ဂမ် က ရိုက်စ် နဲ့ အလိုက်ဖက်ဆုံး ဒုတိယ ကွင်းလယ်လူ လို့ပဲ ထင်ပါတယ် ။ ”
” ဟယ်ရီကိန်း ကော ဂရီးလစ်ရှ် ကောက လုံးဝ ပစ်ပယ်လို့ မရတဲ့ ကစားသမားတွေပါ ၊ ဂရီးလစ်ရှ် ရဲ့ အကောင်းဆုံး နေရာက တိုက်စစ် ဘယ်ခြမ်းမှာပါ ၊ ရက်ရှ်ဖိုဒ့် ကလည်း အဲ့နေရာမှာပဲ ကစားနိုင်ပါတယ် ၊ ရက်ရှ်ဖိုဒ့် ကို ညာခြမ်း ထွက်ကစားခိုင်းတာနဲ့ ခြေစွမ်းပျောက်တော့တာပါပဲ ။ ”
” ဟယ်ရီ က နောက်ဆင်းပီး ရက်ရှ်ဖိုဒ့် တိုက်စစ်မှာ နေရာလွတ်ရအောင် လုပ်ပေးတာ တွေ့ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ဂရီးလစ်ရှ် က ကျနော့် အတွက် ထူးခြားကောင်းမွန်ပါတယ် ၊ သူ့ရဲ့ ဖန်တီးနိုင်စွမ်း အရည်အသွေးက သိပ်ကောင်းပါတယ် ။ သူ့ကို ကြည့်ရတာ ဖီဂို ကိုတောင် ပြန်အမှတ်ရမိပါသေးတယ် ၊ ကျနော် တစ်ယောက် နဲ့ တစ်ယောက် နှိုင်းယှဉ်ရတာမျိုး မကြိုက်ပါဘူး ၊ ဒါပေမယ့် သူက ဖီဂို နဲ့ အနည်းငယ် ဆင်ပါတယ် ။ ”
” ကျနော့် နည်းပြ ဘဝမှာ ဖီဂို နဲ့ လက်တွဲခွင့် ရခဲ့ပါတယ် ၊ သူ့ရဲ့ ကစားသမား ဘဝ နောက်ဆုံးရာသီ အင်တာမှာ သူနဲ့ ဆုံခဲ့ရပါတယ် ၊ သူ့ရဲ့ နောက်ဆုံး ရာသီမှာတောင် သူ့ကိုသာ ဘောလုံးပေးလိုက် ၊ ပြဿနာ အားလုံးကို ဖြေရှင်းပေးမယ်လို့ ပြောခဲ့သူပါ ။ ”
” ကျနော် သူ့ကို တကယ် သဘောကျပါတယ် ၊ ဂရီးလစ်ရှ် ကို ဘယ်ခြမ်းမှာထား ၊ မေဆင်မောင့်ကို နံပါတ် ၁၀ နေရာမှာထားကစားသင့်ပါတယ် ၊ ကျနော်က inverted winger တွေကို သဘောကျတာကြောင့်လည်း ပါပါတယ် ၊ ဖိုဒန်ကိုတော့ ညာခြမ်းမှာပေါ့ဗျာ ။ဖိုဒန် ၊ ဂရီးလစ်ရှ် ၊ မေဆင်မောင့် တို့ကို ပွဲထွက်စေချင်တာကြောင့် ကွင်းလယ်မှာ ရိုက်စ် နဲ့ ကယ်ဗင်ဖီးလစ် ကို ထားတာပါ ။ ” လို့ ပြောကြား သွားခဲ့ပါတယ် ။
GOAT ၂ ဦးကို အတူတွဲပေးချင်တဲ့ ဘာစီလိုနာ ၊ ကိန်း အတွက် ကမ်းလှမ်းတော့မယ့် မန်စီးတီး တို့နဲ့ . . . ယနေ့ အတွက် နောက်ဆုံးရ အားကစား သတင်းများ
ပွဲချိန် ၈၉ မိနစ်မှာ ဂိုးသမားကို လူစားလဲမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ချီးကျုးခံနေရတဲ့ အီတလီနည်းပြကြီး မန်စီနီ
ယူရိုပြိုင်ပွဲမှာ ဗိုလ်စွဲနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် အင်္ဂလန် တစ်သင်းလုံး အတူ လုပ်သွားဖို့ သဘောတူထားတဲ့ အရာကို ပြောလိုက်တဲ့ ဖိုဒန်
June 21, 2021 - by Editor
ကိုဗစ် ပိုးတွေ့ရှိမှုကြောင့် ခရိုအေးရှား အသင်းနဲ့ ကစားမယ့် ယူရို အုပ်စု နောက်ဆုံး ပွဲစဉ်ကို လွဲချော် တော့မယ့် စကော့တလန် လူငယ်လေး ဘီလီ ဂေလ်မာ ဟာ ၁၀ ရက် ကွာရင်တိုင်း စတင် ၀င်ရောက်နေပြီလို့ သိရပါတယ် ။ ဂေလ်မာ ကိုဗစ် ကူးစက်ခံရတဲ့ သတင်း ထွက်ပေါ်ပြီးပြီးချင်းမှာပဲ စကော့တလန် …
၁၀၀% နိုင်ပွဲ ၊ ပွဲ ၃၀ ဆက်တိုက် ရှုံးပွဲမရှိတဲ့ အီတလီတို့ ဘယ်အဆင့်ထိရောက်နိုင်မလဲ ?
အီတလီနဲ့ပွဲမှာ တိုက်ရိုက် အနီထိခဲ့တဲ့ ချဲလ်ဆီး လူငယ် နောက်ခံလူဖက်မှ အသီးသီး ကာကွယ်ပေးလိုက်ကြတဲ့ ဘေးလ်နဲ့ ရမ်ဆေး
ယူရို ၂၀၂၀ အပြီးမှာ ကလပ်ကနေ ထွက်ခွာဖို့ ရှိနေတဲ့ နီကို၀ီလီယံ အတွက် စျေးနှုန်းသတ်မှတ်ပေးလိုက်တဲ့ လီဗာပူး
အရပ်ကူပါ လူဝုိင်းပါ ဖြစ်နေတဲ့ ဘာစီလိုနာ ဥက္ကဋ္ဌသစ် ဂျိုအန်လာပေါ်တာ
နီကိုဝီလီယံ အနေနဲ့ ယူရို ၂၀၂၀ ပြိုင်ပွဲ ပြီးဆုံးတဲ့ အခါ အန်ဖီးကနေ ထွက်ခွာဖို့ ကြိုးစားလိမ့်မယ်လို့ လီဗာပူး အသင်း ဘက်က မျှော်လင့်နေပြီး ကလပ်ဟာ ဝေးလ်လက်ရွေးစင် ညာနောက်ခံလူ အတွက် အနည်းငယ် ပေါင် ၁၀ သန်း တောင်းဆို သွားဖို့ ရှိနေပါတယ်။ အန်ဖီး တာ၀န်ရှိသူတွေက အသက် ၂၀ …
အင်္ဂလန်မှာ ဖိုဒန် အကောင်းဆုံး ခြေစွမ်း မပြနိုင်သေးတဲ့ အကြောင်းအရင်းကိုပြောပြလိုက်ပြီး နည်းပြဆောက်ဂိတ်ရဲ့ ရွေးချယ်မှုကို မေးခွန်းထုတ်လိုက်တဲ့ ရွန်းနီ
လိုကွန်ဂါ ကို ခေါ်ယူဖို့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး သဘောတူညီမှု ရသွားတဲ့ အာဆင်နယ် အသင်းရဲ့ နောက်ဆုံးရ အပြောင်းအရွှေ့သတင်းများ